Cecilia Wikström: ” Magangalyo doonka xaq uma laha in uu kala doorto dalalka “ | Somaliska
Qofka magangalyo doonka ah ee doonayo inuu dal magangalyo weydiisto xaq uma laha inuu kala doorto dalalka siinaya magangalyada. Sidaasi waxaa aaminsan hanweeneyda lugu magacaabo Cecilia Wikström oo ah xildhaabinad xisbiga Leeybarka dalkaan Iswiidhan u fadhisa Midowga Yurub.
Cecilia Wikström ayaa ka mid ah koox baarlamaanka Midowga ku jira oo looga fadhiyo ineey keenaan fikrado mideeysan oo la xirriirta siyaasadda muhaajiriinta oo Midowgu yeesho islamarkaasna dib u habeeyn lugu sameeyo caqdigii Dubliin.
Cecilia Wikström, ayaa sidoo kale sheegtay in haddii golluhu isku dayi lahaa oo keliya in uu faa’ido helo ay xaaladu cakirnaan laheyd. “Haddii si cadaalad ah golluhu u qeybsanayo mas’uuliyada waxaa muhiim ah in la sameeyo gaashaandhig la wada wadaago” ayey ku tiri maqaal aragtideeda ah oo ay ku soo daabacday toddobaadkan horaantiisa wargeyska maalin laha ah ee Dagens Nyheter. Midowga Yurub ayaa sameeystay cahdi ama heshiis ay ugu magac dareen “Cahdigii Dubliin” Kaas oo dhigaya in qofka magangalyo weydiista dal ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub uusan dalka kale oo xubnaha ka mid ah qaabili karin kuna soo celinayo dalkii markii ugu horeeyey uu iska dhiibay ama weydiistay magangalyada.
Baaritaan lugu sameeyn doono dadyowga aan dib loogu celin karin dalalkii ay ka yimaadeen
Urur looga dhawaaqay Göteborg